सधैंका लागि बेलायत छाडेर नेपाल फर्कंदै डा. बच्चुकैलाश कैनी – Nepalilink
07:52 | १३:३७
सधैंका लागि बेलायत छाडेर नेपाल फर्कंदै डा. बच्चुकैलाश कैनी
लन्डन । बेलायती राजनीतिमा समेत अगाडि बढिसकेका एकजना चर्चित वुद्धिजिवी तथा पूर्व काउन्सिलर डा. बच्चु कैलाश कैनी बेलायत छाडेर मातृभूमि नेपाल फर्कने भएका छन् । लन्डनस्थित क्वीन एलिजावेथ अस्पतालका वरिष्ठ व्यवस्थापक डा. कैनी ललितपुरको हरिसिद्धीमा अवस्थित एक निजी ‘नेपाल क्यान्सर अस्पताल’ मा सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) को जिम्मेवारी लिएर नेपाल फर्कन लागेका हुन् ।
‘बेलायत आएर केही अध्ययन र अनुभव आर्जन गरिसकेपछि नेपाल फर्कने सोच पहिल्यै थियो । अब छोरीले पढाइ सकिएर कानूनी पेशागत काम शुरु गरेको र छोराको मेडिसिनमा ग्रयाजुएसन हुन १५ महिना जति बांकी रहेकाले हामी बुढाबुढी फर्कने सोच बनाऔं’, उनले नेपाली लिंकसंग भने ।
तर, हिजो शनिबार नेपाल उड्ने कार्यक्रम भने कैनीको कोभिड १९ रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि केही समय लम्बिने भएको छ ।